९ सय ९९ सिँढी चढेपछि स्वर्गको ढोका पुगिन्छ….. – SUDUR MEDIA
August 29, 2021 AdminLeaveaComment on ९ सय ९९ सिँढी चढेपछि स्वर्गको ढोका पुगिन्छ…..
एजेन्सी । दुनियामा को मानिस होला जसलाई स्वर्ग पुग्ने चाहना नहोला ? तर स्वर्गको अनुभव गर्न चाहने कोहीपनि मानिसलाई मर्ने इच्छा चाहीँ हुँदैन । अर्थात् जिउँदै स्वर्ग पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना हुन्छ सबैको । तर नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्ने उखान अनुसार जिउँदै स्वर्ग पुग्न नसकिने यथार्थले मन अमिलो बनाउँछ।
यो पनि – अंग्रेजी लेटर एम(M) बाट नाम शुरु हुने व्यक्तिहरु कस्ता हुन्छन् ? अंग्रेजी लेटर एम बाट नाम शुरु हुने व्यक्तिहरु धेरै भाबुक किसिमका हुन्छन्। जहिले पनि गहिरो सोचाइमा डुबिरह ने हुनाले अरुको लागी घातक हुन्छन्, त्यसैले यस्ता व्यक्तिलाई एक्लै छोड्नु हुदैन । त्यस्ता व्यक्तिले सानितिनो कुरालाई पनि मनमा लिने गर्दछन् । त्यसैले यिनीहरुको मन दुखाई दिने कार्य गर्नु हुन्न ।
यी नामका व्यक्तिहरु संवेदनशील पनि उत्तिकै हुन्छन् । प्रेमको लागी जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि पछ पर्दैनन् । उसो त धोका दिनेहरुलाई पनि त्यसै छोड्दैनन । भाग्यमानी हुने भएकाले धन र इज्जत दुवै प्राप्त हुन्छ। यस्ता मानिस राजनीतिमा बढी संग्लग्न हुन्छन् । मानिसहरु यस्ता व्यक्तिलाई मन पराउछन् । मन राम्रो हुन्छ,आफुलाई राम्रो गर्न मानिसलाई कहिल्यै हानी पुर्याउदैन।
यो पनि – जिन्स पाइन्टमा किन हुन्छ ठूलो सँगै सानो गोजी ? दैनिक जिवनका ४ रोचक तथ्य र वास्तविकता ! हाम्रो जिवनमा केही यस्ता कुराहरु हुन्छन् जसलाई हामी हरेक दिन देखे भोगको हुन्छौँ तर त्यस्तो कुरा तथा घटना हुनु पछाडिको कारण कहिल्यैपनि जानेका हुँदैनौँ र जान्ने कोसिस पनि गर्दैनौँ । हाम्रो दैनिक जिवन सँग सम्बन्धित केही रहस्य तथा तथ्य र त्यसमा लुकेको गुह्य वास्तविकता यस्ता छन्ः